Dhijitari Kugadzira MIBVUNZO / Gadziraproto - Gadziraproto Tech Co, Ltd.
ZVINOKOSHA / MIBVUNZO
Ndeupi mukana wekushanda nemaProtolabs? Nei ndichifanira kusarudza kambani yako kuti iite zvikamu zvangu?
Yedu maindasitiri 3D kudhinda, CNC machining, jira simbi nhema, uye jekiseni kuumbwa masevhisi anopa zvikamu zvakagadzirwa zvakananga kubva kumutengi 3D CAD modhi, zvichideredza mukana wekukanganisa. Proprietary software inogadzira toolpath chizvarwa kudzikisa nguva dzekugadzira uye kudzikisa mutengo.
Ndeapi makambani aunoshanda nawo?
Nekuda kwehunhu uye kukwikwidza hunhu hwemapurojekiti atinoshanda, isu hatizivise rondedzero yevatengi vedu. Nekudaro, isu tinogaro gamuchira mvumo yekugovana vatengi kubudirira nyaya. Verenga nyaya dzekubudirira kwedu pano.
Chibvumirano Chisingazivikanwe (NDA) chinodikanwa kuti chiite bhizinesi nePeopleProto?
An NDA haina kudikanwa kuti uite bhizinesi naGadziraProto. Kana iwe uchiisa yako CAD modhi kune yedu saiti, isu tinoshandisa mamiriro-e-iyo-art kunyorera uye chero chinhu chaunoteedzera chinochengetedzwa nekuvanzika zvakavanzika. Kuti uwane rumwe ruzivo, bata account yako mumiriri.
Ndeapi maindasitiri anoshandisa GadziraProto mabasa?
Isu tinoshumira maindasitiri akasiyana siyana anosanganisira ekurapa mudziyo, mota, mwenje, muchadenga, tekinoroji, chigadzirwa chemutengi, uye zvemagetsi.
When ndinofanira kushandisa machine maringe jekiseni Kuumbwa?
Usati waita kudyara kuve nejekiseni-chakuvhuvhu tooling yakagadzirwa kana yakakwira-vhoriyamu machina maitiro, iwe ungangoda kuyedza chikamu chiri padhuze nechikamu chekugadzira sezvinobvira. CNC machine ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo iyi.
Pamusoro pezvo, mainjiniya anowanzo kuda imwe chete kana zvimwe zvikamu zvishoma zvezvibodzwa zvekuyedza, magungano egungano, kana magadzirirwo egungano. Machining ndiyo yakanakisa sarudzo pano futi, asi echinyakare mashopu emashopu anowanzo bhadharisa yakakosha isingadzokororwe mainjiniya (NRE) kubhadharisa programming uye fixturing. Iyi NRE kuchaja kazhinji inoita kuti kuwana mashoma kwazvo mashoma asakwanise. Iyo otomatiki CNC machining maitiro inobvisa iyo yepamberi NRE mutengo uye inokwanisa kupa zviyero zvakaderera sechikamu chimwe pamutengo unodhura uye uwane zvikamu mumaoko ako nekukurumidza sezuva rimwe chete.
Jekiseni Kuumbwa kuri nani inokodzera kutsigira hombe huwandu hwesampuli yekushanda kana kwemusika kuyedzwa, zambuko tooling, kana yakaderera-vhoriyamu kugadzirwa. Kana iwe uchida zvikamu pamberi pechinhu chesimbi chingaitwe (kazhinji mavhiki matanhatu kusvika gumi ane mamwe maumbwe) kana yako vhoriyamu zvinodiwa hazvipembedze anodhura simbi yekugadzira maturusi, tinogona kupa zvigadzirwa zvekugadzira kuti zvizadzise zvido zvako zvizere (kusvika pamazana zviuru gumi nezvina zvikamu) ) mumazuva 1 kusvika gumi nemashanu.
Iwe une michina mangani?
Isu parizvino tine zvigayo zvinopfuura 1,00, lathes, 3D maprinta, michina, mabhureki ekudhinda, uye zvimwe zvigadzirwa zvekugadzira. Nhoroondo yedu refu yekukura, nhamba iyi iri kugara ichichinja.
Nei uine zvigadzirwa zvekugadzira mune dzimwe nyika?
Isu tinogadzira zvikamu zvese zveNorth America nenyika dzese dzeEurope kuzvivakwa zvedu zveChina. Isu tinotumirawo kune dzimwe nyika kune dzimwe nyika zhinji kubva kuzvivakwa zvedu zveChina.
Kuti uwane quote kune ese masevhisi edu, ingo isa 3D CAD modhi pane yedu saiti. Iwe unowana anowirirana akatorwa mukati maawa nemahara dhizaini mhinduro. Kana paine nzvimbo dzezvinetso mune yakatumirwa dhizaini, yedu yekutora injini inopa ruzivo rwakadzama nezve zvingangoitika zvekugadzira nyaya uye inoratidza zvingangodaro mhinduro.
Ndinogona here kutora chikamu changu nemasevhisi ese kamwechete?
Unogona kuwana chitauro chejekiseni nekugadzira, asi chechipiri chitauro che 3D kudhinda chinoda kukumbirwa.
Ndeapi marudzi emafaira aunogamuchira?
Tinogona kugamuchira zvemo SolidWorks (.sldprt) kana ProE (.prt) mafaera pamwe neakasimba 3D CAD mamodheru kubva kune mamwe maCAD masisitimu anoburitswa mu IGES (.igs), STEP (.stp), ACIS (.sat) kana Parasolid (. x_t kana .x_b) fomati. Tinogona zvakare kugamuchira .stl mafaera. Maviri-maviri-maviri (2D) mifananidzo haigamuchirwe.
Handina 3D CAD modhi. Unogona kundigadzirira imwe?
Isu hatipe chero ekugadzira masevhisi panguva ino. Kana iwe uchida rubatsiro kugadzira iyo 3D CAD modhi yepfungwa yako, taura nesu kuburikidza neemail uye isu tinowana iwe yekutaurirana ruzivo rwevagadziri vanoziva nezve maitiro edu.
Protolabs inopa yekupedzisa sarudzo uye yechipiri maitiro neayo masevhisi?
Enhanced yekupedzisa sarudzo uye yechipiri maitiro anowanikwa e 3D kudhinda, jira simbi, uye jekiseni kuumbwa maitiro Isu hatipe nzira dzechipiri dzeCCC machining panguva ino.
Iwe unopa chekutanga chinyorwa chekuongorora (FAI) sevhisi?
Isu tinopa FAIs pane zvakagadzirwa uye zvakaumbwa zvikamu.
Kudhinda kwe3D kwakasiyana sei paGadziraProto?
Zvese zvatinoita paGadziraProto yakanangana nekupa inokurumidza uye epamusoro mhando prototypes uye zvigadzirwa zvigadzirwa muindastiri. Izvi zvinoda tekinoroji yazvino, inotarisirwa neyakaomesesa maitiro ekudzora. Yedu maindasitiri-giredhi 3D michina yekudhinda ndeye-ye-iyo-iyo-uye yakanyatso chengetwa kuita senge nyowani neese kuvaka. Kurongedza zvese izvi, vashandi vedu vakarovedzwa vanogadzira zvikamu zvako zvinoenderana nemaitiro akakwenenzverwa.
Chii chinonzi stereolithography?
Nepo stereolithography (SL) iri dangwe pane ese e3D kudhinda matekinoroji, inoramba iri yegoridhe chiyero cheyese kururamisa, pamusoro pekupedzisa, uye kugadzirisa. Iyo inoshandisa iyo ultraviolet laser yakanangidzirwa kune diki poindi, ichikwevera pamusoro pechinhu chemvura thermoset resin. Kwazvinodhonza, mvura yacho inoshanduka ikaita yakasimba. Izvi zvinodzokororwa mutete, maviri-mativi emuchinjikwa-akaturikidzana kuita mativi akaomarara mativi-matatu. Zvinhu zvemidziyo zvinowanzo kuve zvakaderera kune izvo zvekusarudza laser sintering (SLS), asi iyo yekumusoro kupedzisa uye ruzivo hazvifananidzwe.
Chii chinonzi laser sintering?
Inosarudza laser sintering (SLS) inoshandisa CO2 laser inokwevera pamubhedha unopisa weiyo thermoplastic powder. Iyo painodhonza, inorerutsa hupfu kuita yakasimba. Mushure mega roga riya, chinotenderera chinoisa hwatsva hwehupfu pamusoro pemubhedha uye maitiro acho anodzokorora. Sezvo SLS inoshandisa chaiyo mainjiniya thermoplastics, ayo 3D-akadhindwa zvikamu anoratidza kukura kukuru.
Chii chinonzi PolyJet?
PolyJet inovaka yakawanda-yezvinhu prototypes ine inochinjika maficha uye akaomarara zvikamu nemaomesa akaomarara geometri. Mhando yeukukutu (durometers) inowanikwa, iyo inoshanda nemazvo kune zvikamu zvine elastomeric maficha senge magaskets, zvisimbiso, uye dzimba. PolyJet inoshandisa jetting maitiro uko madonhwe madiki emvura photopolymer anosaswa kubva kumajeti akawanda kuenda kune yekuvaka chikuva uye kunorapwa dura neyakaenzana. Mushure mekuvaka, zvinhu zvekutsigira zvinobviswa pamurume. Zvikamu zvino zvakagadzirira kushandiswa pasina kukosha kwekurapwa mushure.
Chii chinonzi Direct simbi laser sintering?
Direct simbi laser sintering (DMLS) inoshandisa fiber laser system inokwevera pamusoro peatomized simbi yeupfu, ichimisa iyo poda kuita yakasimba. Mushure mega roga roga, dzoo rinodzora rinowedzera nyowani nhete yeupfu uye rinodzokorora maitiro kusvikira chikamu chekupedzisira chesimbi chaumbwa. DMLS inogona kushandisa alloys mazhinji, ichibvumira zvikamu kuti zvive zvinoshanda Hardware zvakagadzirwa kubva kune imwecheteyo zvinhu sezvinhu zvekugadzira. Sezvo izvo zvikamu zvakavakwa zvakaturikidzana netaundi, zvinokwanisika kugadzira zvemukati maficha uye ndima dzisingakwanise kukandwa kana neimwe nzira kugadzirwa.
DMLS zvikamu zvakakurisa sei?
Zvikamu zveDMLS zvine 97% gobvu.
Nekuda kwehunhu uye kukwikwidza hunhu hwemapurojekiti atinoshanda, isu hatizivise rondedzero yevatengi vedu. Nekudaro, isu tinogaro gamuchira mvumo yekugovana vatengi kubudirira nyaya. Verenga nyaya dzenyaya pano.
Isu hatipe chero ekugadzira masevhisi panguva ino. Kana iwe uchida rubatsiro kugadzira iyo 3D CAD modhi yemafungiro ako, taura nesu kuburikidza neemail uye isu tinokupa iwe ruzivo rwekufonera kumafemu ekugadzira ayo anoziva maitiro edu.
Ndeupi mutengo chaiwo weiyo 3D-yakadhindwa zvikamu paGadziraProto?
Mitengo inotanga kutenderera madhora makumi mapfumbamwe nemashanu, asi nzira yakanakisa ndeye kuendesa iyo 3D CAD modhi kuti uwane yekudyidzana quote.
Chii chinonzi CreateProto 'CNC machining kugona?
Isu tinogaya uye tinodzora huwandu hwakawanda hwezvikamu nekukurumidza. Chaiwo huwandu hwakawanda zvidimbu chimwe kusvika mazana maviri uye nguva dzekugadzira dziri 1 kusvika 3 mazuva ebhizinesi. Isu tinopa vagadziri vezvigadzirwa zvikamu zvakagadzirwa kubva kuinjiniya-giredhi zvinhu zvinokodzera kuongororwa kunoshanda kana kushandiswa kwekupedzisira.
Chii chakasarudzika nezve maitiro eGadziraProto?
Yedu yekutora maitiro haina kumboitika mune yekugadzira indasitiri. Isu takagadzira yekodhi kudzokorora software inomhanya pane yakakura-chikamu compute sumbu uye inogadzira iyo CNC maturusi maturati anodikanwa kumuchina wako chikamu. Mhedzisiro yacho inokurumidza, yakapusa, uye yakapusa nzira yekutora makotesheni uye odha michina zvikamu.
Ndeupi mutengo chaiwo wechikamu chakagadzirwa paGadziraProto?
Mitengo inotanga kutenderera madhora makumi matanhatu nemashanu, asi nzira yakanakisa yekuziva ndeye kuendesa 3D CAD modhi uye uwane ProtoQuote yekudyidzana quote. Nekuti isu tinoshandisa zvine chekuita nesoftware uye otomatiki mafirita maitiro, hapana kumberi kumberi isiri-inodzokororwa mainjiniya (NRE) mutengo. Izvi zvinoita kuti huwandu hwekutenga hwakaderera se1 kusvika mazana maviri emitengo anodhura. Mitengo inofananidzwa ne 3D kudhinda yakaenzana kune yakati kurei, asi machining anopa akavandudzwa ehupfumi zvinhu uye nzvimbo.
Maitiro ekutora anoshanda sei?
Paunenge iwe waisa yako 3D CAD modhi kune webhusaiti yedu, software yacho inotara mutengo kuti ubudise dhizaini yako mune zvakasiyana zvinhu uye wozogadzira iyo "as-milled maonero" echikamu chako. Chitauro chekudyidzana chinopihwa icho chinokutendera kuti uongorore sarudzo yemidziyo yakasiyana uye huwandu hwakasiyana, pamwe nekutarisisa kwe 3D nezvekuti chikamu chako chakasanganiswa chingaenzaniswe sei neyako yepakutanga misiyano yakaratidzwa. Ona ProtoQuote preview pano.
Chii chinonzi CreateProto zvigadzirwa zvemuchina?
Isu tinochengetera akasiyana epurasitiki uye esimbi zvinhu kubva kuABS, nylon, PC, uye PP kune isina simbi simbi, aluminium, mhangura, uye ndarira. Ona rondedzero izere yezvinhu zvinopfuura makumi mana zvakachengetwa zvekugaya nekutenderera. Panguva ino, isu hatigamuchire vatengi-yakapihwa zvinhu zvekugadzira.
Chii chinonzi CreateProto 'machining kugona? Chikamu chipi chinogona kuva chikamu changu?
Kuti uwane ruzivo nezve chikamu saizi uye zvimwe zvekufunga nezvekugaya nekutendeuka, ndapota tarisa yedu yekugaya dhizaini dhizaini uye yekushandura dhizaini dhizaini.
Nei ndichifanira kuve nechikamu changu chakagadzirwa pane kuti 3D iprindwe?
Zvigadzirwa zvemuchina zvine zvivakwa zvechokwadi zvezvinhu zvaunosarudza. Maitiro edu anotendera iwe kuti utore zvikamu zvakavezwa kubva kumabhuroko epurasitiki yakasimba nesimbi panguva imwechete, kana zvisiri kukurumidza, kupfuura 3D-yakadhindwa zvikamu.
Chii chinonzi CreateProto 'sheet simbi kugona?
Isu tinogadzira zvinoshanda prototypes uye magumo-ekushandisa zvikamu mune nekukurumidza semazuva matatu.
Kuburikidza nekugadzira uye kugadzira otomatiki, GadziraProto inokwanisa kuwana mhando yemashizha esimbi mumaoko ako mukati memazuva.
Ndeipi inowanzo mutengo wemashiti simbi chikamu paGadziraProto?
Mitengo inosiyana asi inogona kutanga kutenderedza $ 125, zvinoenderana nechikamu geometry uye kuomarara. Nzira yakanakisa yekufungidzira mutengo wako kurodha yako modhi kune webhusaiti yedu kuti ugamuchire YEMAHARA quote mukati maawa. Kana iwe uchida kudhura nekukasira uye dhizaini yemhinduro yekugadzira, tora yedu yemahara yekuwedzera-muRapid yeSolidworks.
Ko jira resimbi rinotora maitiro rinoshanda sei?
Pamashizha esimbi makotesheni, iwe uchafanirwa kuisa yako CAD modhi uye maratidziro kune quote.rapidmanufacturing.com. Iwe uchagamuchira yakadzama quote mukati memaawa. Paunenge iwe wagadzirira kuodha zvikamu, unogona kupinda mu myRapid kuisa odha yako.
Chii chinonzi CreateProto zvigadzirwa zvemashiti simbi?
Isu tinotakura zvinhu zvakasiyana-siyana zvesimbi zvinosanganisira simbi isina simbi, aluminium, mhangura, uye ndarira. Ona runyorwa ruzere rwezvinhu zvakazara zvesheet simbi yekugadzira.
Chii chinonzi CreateProto 'kugona? Chikamu chipi chinogona kuva chikamu changu?
Kuti uwane ruzivo nezve chikamu saizi uye zvimwe zvekufungidzirwa kwesheet simbi yekugadzira, ndapota tarisa yedu sheet simbi dhizaini mirayiridzo.
Chii chinonzi CreateProto 'jekiseni kuumbwa kugona?
Isu tinopa epurasitiki uye yemvura silicone yerabha kuumba pamwe nekuwedzeredza uye kuisa kuumbwa mune yakaderera-vhoriyamu huwandu hwe25 kusvika 10,000+ zvidimbu. Akajairika ekugadzira nguva ane 1 kune gumi nemashanu mazuva ebhizinesi. Kukurumidza jekiseni kuumbwa kunobatsira vagadziri vezvigadzirwa kuwana prototypes uye zvigadzirwa zvekugadzira zvinokodzera kuongororwa kunoshanda kana kushandiswa kwekupedzisira mukati memazuva.
Isu takashandura maitiro ekutora mazwi, kugadzira, uye kugadzira zvigadzirwa zvinoenderana nevatengi-vanopihwa 3D CAD chikamu mamodheru. Nekuda kweiyi otomatiki, uye inomhanya software pane Ultra-inokurumidza komputa masumbu, isu tinowanzo cheka nguva yekugadzira yezvikamu zvekutanga kune chetatu cheicho chetsika nzira.
Ndeipi yakajairwa mutengo wejekiseni-yakaumbwa zvikamu neIsaProto?
Mitengo inotanga kutenderera madhora 1,495, zvinoenderana nechikamu geometry uye kuomarara. Nzira yakanakisa yekufungidzira mutengo ndeyekuisa yako modhi kune yedu webhusaiti kuti ugamuchire iyo yekudyidzana quote mukati maawa. Protolabs inokwanisa kugadzira chakuvhuvhu chako pachikamu chidiki chemutengo weyakajairika jekiseni kuumbwa nekuda kweedu proprietary ongororo software, otomatiki maitiro, uye kushandiswa kwealuminium mafomu.
Kuwana quote inopindirana icharatidza zvishandiso uye kupedzisa kunowanikwa, simbisa chero zvingangoitika nyaya nekugadzira chikamu chako, uye kuratidza nekukurumidza-kutendeuka uye sarudzo dzekuendesa dziripo (zvinoenderana neyako geometry). Iwe unozoona mutengo zvinoreva izvo zvako zvinhu uye huwandu hwesarudzo munguva chaiyo-hapana chikonzero chekutangazve. Ona muenzaniso ProtoQuote pano.
Ndeapi masosi anogona (kana ndinofanira) kushandisa?
Vagadziri vanofanirwa kufunga nezvekushandisa-zvakasarudzika zvinhu senge tensile simba, kukanganisa kusagadzikana kana ductility, mechimiro maitiro, kuumba zvivakwa, uye mutengo weiyo resin kana uchisarudza resin. Kana iwe uchida rubatsiro kusarudza zvinhu, ndapota inzwa wakasununguka kutifonera.
Chii chinonzi CreateProto 'akachengetwa resini ejekiseni kuumbwa?
Isu tinogadzira zvinopfuura zana thermoplastic resin uye zvakare tinogamuchira akawanda mutengi-anopihwa resin. Ona iro rizere runyorwa rweProtolabs 'akachengetwa resini.
Kuti uwane ruzivo nezve chikamu saizi uye zvimwe zvekufunga jekiseni kuumbwa, ndapota ona edu dhizaini mirayiridzo.
Nei ndichifanira kutenga chakaumbwa chikamu pane iyo 3D-yakadhindwa chikamu?
Yakaumbwa zvikamu kubva kuProtolabs ichave iine echokwadi maficha echinhu chaunosarudza. Ichokwadi zvinhu zvemidziyo uye yakavandudzwa pamusoro pekupedzisa, jekiseni-rakaumbwa zvikamu zvinokodzera kuongororwa kunoshanda uye kuguma-kushandisa kugadzirwa.
Chii chinonzi CreateProto Yakarongedzwa Ongororo?
Iyo Yakarongedzwa Kudzokorora ndeye yakatemerwa kuchinjiswa kune yako chikamu geometry kuti uve nechokwadi chekuti dhizaini yako inoenderana nehunyanzvi hwekukurumidza kwedu kugadzira maitiro.
Ndeipi faira fomati yauchanditumira?
Zvinoenderana nesosi faira. Kazhinji, isu tinopa STEP, IGES, uye SolidWorks mafaera.
Kana ndichida shanduko, ndinofanira kuitei?
Unogona kutenga chikamu sekuratidzwa kwachakaitwa nekudzokorora kana:
hapana shanduko dzisina kugadziriswa dzinodiwa.
iwe unobvuma Zvakarongedzwa Kudzokorora nekutarisa bhokisi mune chikamu chechitatu chekodhi.
Kana ini ndichida shanduko asi ndichida kuhodha kubva kune yangu chaiyo faira faira, ndinoita sei?
Gadziridza yako modhi kuti ifananidze Zvakarongedzwa Kudzokorora uye wozvitumira zvakare:
Dzvanya bhatani re'Download Revised Model 'muchikamu chechipiri chekotesheni yekuenzanisa iyo Protolabs geometry kune yako yekutanga vhezheni.
Dzokorora shanduko inoratidzwa neProtolabs mune yako yega modelling chishandiso uye wobva waendesa chikamu chako chekota. Kudzokorora zvakare kunodiwa nemaitiro edu kuona mutambo pakati pechikamu uye chikamu.
Quote yakagadziridzwa inofanirwa kudzoserwa pasina shanduko inodiwa uye nekudaro, chikamu chako chinofanirwa kunge chakarongeka.
Chii chandinofanira kuita kana ndisingade (kana kutadza kubvuma) shanduko?
Dhizaini nyaya dzinogona kugadziriswa nenzira dzakawanda. Unogona:
chinja yako chikamu geometry imwe nzira yekusangana nechinangwa cheiyo Yakarongedzwa Kudzokorora.
kurukurai dzimwe mhinduro nekutaurirana nainjiniya wekushandisa pa + 1-86-138-2314-6859 kana vatengiervice@createproto.com.
Ini ndinowana sei zvimwe pamusoro pekuti nei maita shanduko?
Kuti ukurukure zvinodiwa, bata anoshanda mainjiniya pa + 1-86-138-2314-6859 kana vatengiervice@createproto.com.
Pane mari yekuwedzera here? Ndeupi mutengo webasa iri?
Dzakarongedzwa Dzokororo dzinopihwa pasina imwezve mari. Yakagadziridzwa geometry inotengeswa chero chero chikamu chingave. Dzimwe shanduko dzinokanganisa mutengo kumusoro kana pasi. Mukuita, mitengo yakawanda inochinja kubva kudiki kudzokorora kwejometri haina basa.
Iri ibasa rekugadzira here?
Isu hatipe zvigadzirwa zvekugadzira zvigadzirwa. Dzakarongedzwa Dzokororo dzinopihwa kuratidza geometry inoenderana neyedu nzira yekugadzira.
Nei ndakakumbirwa kuvandudza yangu Protoviewer plug-in?
Dzakarongedzwa Dzokororo dzinoenderana nezvitsva Protoviewer vhezheni chete.
Chii chinoitika kana chikamu changu chikasashanda zvichienderana neshanduko yeProtolabs?
Iwe une basa rechikamu dhizaini uye basa.
Ini ndinogona here kusarudza kunze kweProjekiti Yekudzokorora maitiro?
Tinovimba unowana sevhisi yakakosha, asi kana iwe ukasada kutora chikamu, cherekedza saka kana iwe uchiisa chako chikamu.
3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Cnc Rapid Prototyping, Cnc Kuchengetedza, Kukurumidza Prototyping, Kurumidza Prototyping,